१४ जेष्ठ २०७७ बुधबार Wednesday, May 27, 2020
KATHMANDUTemperature 27°CAir Quality87
जन्ती बनेर मोदीसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि आउने चर्चा चल्यो । संघीय सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि प्रदेश २ को सरकारले भित्रभित्रै तयारी थाल्यो ।
६ पुस २०७५ शुक्रबार
त्रेता युगमा राम र सीताको विवाह भएको सम्झनास्वरूप हरेक वर्ष मंसिरमा विवाह महोत्सव हुन्छ, जनकपुरमा । सीताको माइती जनकपुर । रामको घर अयोध्या । त्रेता युगपछि साधु–सन्तबीच चलिरहेको यो धार्मिक वैवाहिक परम्परामा सहभागी हुन यसपालि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैँ आउने इच्छा राखे ।
बिमस्टेक सम्मेलनमा नेपाल आउँदा मोदीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले औपचारिक निम्तो पनि गरे । जन्ती बनेर मोदीसँगै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि आउने चर्चा चल्यो । संघीय सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाएपछि प्रदेश २ को सरकारले भित्रभित्रै तयारी थाल्यो । विशेष पाहुना आउने भन्दै प्रदेश सरकारले विवाह महोत्सवको तयारीका लागि जानकी मन्दिरलाई ५० लाख रुपैयाँ दियो । तर मोदीको जनकपुर भ्रमण रोकियो ।
योगी आउने खबर फैलियो । प्रदेश सरकारले योगीको जनकपुर भ्रमण टुंगो लागेको दाबी गर्‍यो । तर संघीय सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयले योगीको जनकपुर भ्रमणबारे आधिकारिक वक्तव्य दिएनन् । प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले त्यसको विरोध जनायो ।
यता प्रदेश सरकार, जानकी मन्दिर र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले योगीको जनकपुर भ्रमण तयारी तीव्र पारे । संघीय सरकारले योगीको जनकपुर भ्रमणबारे औपचारिक त बोलेन नै, आफ्नै सरकारी निकायलाई पनि लिखित केही पठाएन । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कणेलले ‘उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने’ भन्दै मिडियासँग कुरा गरे । सोध्दा उनले भ्रमणबारे औपचारिक केही नआएको बताउँथे ।
योगी जनकपुर भ्रमणमा आउने साताअघि मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवले प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीलाई टेलिफोनमा मात्रै जानकारी गराए । संघीय सरकारले आधिकारिक नबोल्दा र आउने/नआउने अन्योलबीच योगीले जनकपुर भ्रमण गरे ।
२८ वैशाखमा भारतबाट सीधै जनकपुर उत्रिएका मुख्यमन्त्री योगीले प्रधानमन्त्री मोदीकै शैली पछ्याए । जानकी मन्दिरमा मोदीले जस्तै विशेष पूजाअर्चना गरे । रंगभूमि मैदानमा आयोजित विवाह महोत्सवको सम्बोधन मोदीकै शैलीमा गरे । ‘जय सीता मइँया–जय श्रीराम’ भन्दै सम्बोधन सुरु गरेका योगीले नेपाली भाषामै भने, “तपाईंहरु सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार । सबै नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीका लागि प्रधानमन्त्री मोदीको बधाइ र शुभकामना बोकेर आएको छु । तपाईंहरुका माझमा भारतवासीको दूत भएर उपस्थित भएको छु ।”
नेपालमा आउँदा मोदीले प्राय: बोल्ने एउटा समान शब्द छ, ‘कनेक्टिभिटी’ । योगीले पनि त्यही दोहोर्‍याए । भने, “नेपाल–भारतबीच धार्मिक, सांस्कृतिक र पारिवारिक सम्बन्ध छ । यसलाई मजबुत पार्न दुवै देशले कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ ।” उनले मोदीले जस्तो नेपाललाई लाभान्वित हुने भारतीय योजनाको फेहरिस्त पनि सुनाए ।
योगी मुख्यमन्त्री हुनुअघि साधु नै थिए । अहिले पनि साधुकै भेषभूषामा हुन्छन् । मोदीलाई राजनीतिक गुरु मान्ने योगीको भाषण शैली र शब्दमा पनि उनकै झल्को देखियो । मोदीले जनकपुर आउँदा भनेका थिए, “यहाँ आउँदा मलाई अपनत्व महसुस भइरहेको छ ।” योगीलाई पनि त्यस्तै भयो, जुन उनले पनि बोले ।
३० मिनेटको सम्बोधनमा योगीले नेपाल आउँदा मोदीले बोलेकै कुराको व्याख्यामा बढी समय खर्चे ।
मुख्यमन्त्री योगी आउने भएपछि विवाह पञ्चमीको दिन हजारौँ दर्शनार्थीलाई सडकमै रोकेर जानकी मन्दिर प्रवेशमा बिहानैदेखि रोक लगाइयो । नेपाल र भारतबाट हजारौँको संख्यामा हिन्दु धर्मावलम्बी विवाह महोत्सवमा जनकपुर आउँछन् । यसपालि योगी आएपछि दर्शनार्थीको संख्या झनै बढ्यो ।
जानकी मन्दिर प्रवेश गर्ने चारैतिरका बाटोमा ब्यारिकेट लगाएर ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी खटाइयो । उनीहरुको काम मन्दिर प्रवेश गर्ने दर्शनार्थीलाई रोक्नु मात्रै थियो । विवाह पञ्चमीका दिन केही नखाई जानकी मन्दिर पुग्ने दर्शनार्थीको संख्या ठूलो हुन्छ । एक दर्शनार्थीले सुरक्षाकर्मी गुहार्दै भनिन्, “बिहानैदेखि केही खाएकी छैन । बिरामी पनि छु । टाढा जानु छ । दर्शन गर्न जान दिनु न ।” तर सुरक्षाकर्मीले भीआईपी आउने भन्दै उनलाई मन्दिर प्रवेश गर्नै दिएनन् ।
मुख्यमन्त्री योगीले विशेष पूजा गरेर फर्किएपछि मात्रै १२ बजेतिर सर्वसाधारणलाई जानकी मन्दिर प्रवेश खुला गरियो ।
कोरोना संकटबाट सिकौँ, नत्र अझै दु:ख पाउने छौँ
नक्सामा व्यक्त नेपाली अडान : भारतलाई अब पन्छिने सुविधा छैन
हामी कस्तो युवा नेतृत्व खोज्दै छौँ ?
कोरोना अस्पतालमा चित्रहरू बन्‍न पुगे, उनका साथी र साक्षी
विद्रोह गर्दैमा रातारात मान्छेहरूको मस्तिष्क र व्यवहार परिवर्तन हुने भए पो ? पढेका, बुझेका...
मेरो बिहे किन भएन ?
औसत स्तरको पढाइबाट माथि उक्लन सजिलो छैन । जसले पढाइमा जिन्दगीको उज्यालो प्रकाश देख्छ, पढाइ...
विद्यार्थीहरूले पढाइ कसरी सुधार्ने ?
कोरोनाकै कारण आम अभिभावकले आफ्ना सन्तानका लागि समय दिन पाएका छन् । सन्तानले प्रकृति र वनवा...
अनलाइनमा पढाउन हतारो नगरौँ, विकल्प अरु पनि छन्
दलिनमा झुन्डिएको पेट्रोम्याक्सको उज्यालोमा मुवाको त्यस रातको रूप आज पनि प्रस्ट सम्झना छ, म...
मुवाले बन्दुक समातेपछि
‘भाडा दिन ढिलो नगर्नू, पछि एकै पटक भार पर्‍यो नभन्नू । हामीलाई पनि बैंकले फोन गर्न थालिसक्...
खुकुलो लकडाउनको त्रास
सुविधासम्पन्न जीवनयापन बाँचेको अमेरिका देख्दा सबैमा आफूसँग केही नहुनुले पश्चात्ताप हुन्छ ।...
अमेरिकालाई गाली गर्नु पहिले अमेरिका बुझौं